फेसबुक ह्याक भो ? यसो गर्नुस् | युनिभर्सल खबर
Home प्रबिधि फेसबुक ह्याक भो ? यसो गर्नुस्
Posted By: युनिभर्सल खबरon: October 06, 2017 In: प्रबिधि
यदि तपाईको फेसबुक एकाउन्ट कसैले ह्याक गर्‍यो भने के गर्नुहुन्छ रु यसलाई फिर्ता लिन धेरै कठिन छैन । आउनुस्, उपाय थाहा पाउनुस् ।सबैभन्दा पहिले ? मा जानुस् । यहाँ एउटा बटम देखिन्छ जसमा लेखिएको हुन्छ, Your account has been Compromised. यसमा आफ्नो नाम, इमेल र तपाईंको एकाउन्टसित सम्वन्धित फोन नम्बरमध्ये कुनै एकको बारेमा जानकारी दिनुहोस् । facebook-logo त्यस पश्चात तपाईंले आफ्नो एकाउन्ट सर्च गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि पासवर्ड फिर्ता लिने काम सुरु गर्नुपर्छ ।
कुर्कुच्चा फुट्ने समस्या छ? यस्ता छन् घरेलु उपाय